फोक्सोबाट को-रोना भाइरसकाे संक्रमण हटाउने थेरापी पत्ता लाग्यो ! – List Khabar
Home / समाचार / फोक्सोबाट को-रोना भाइरसकाे संक्रमण हटाउने थेरापी पत्ता लाग्यो !
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 193 Views
फोक्सोमा भाइरसको संक्रमण हुँदा मु-त्युको सम्भावना धेरै हुन्छ तर अब भने वैज्ञानिकहरुले को- रोना भाइरसका क-ण हट्ने थेरापी पत्ता लगाएका छन् । थेरापीले फोक्सोमा भएको भाइरसको क-णहरु हट्ने दाबी गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको ग्रिथिथ युनिवर्सिटीको एक टिमले यस्तो एन्टी भाइरल थेरापीबाट फोक्सोमा भएको को-भिड–१९ को क=ण ९९.९ प्रतिशत हट्ने पत्ता लागेको हो ।.
Previous अझै केही दिन उच्च बेगको हावाहुरीसहित भारी वर्षा, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
Next के तपाईले सडकमा भेटिएको पैसा उठाउनु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको राज के हो ?